Olee otu ịhọrọ mmezi arọ?
Gịnị ka anyị kwesịrị ị attentiona ntị na mgbe anyị chọrọ ịzụta ibu? Enwere ọtụtụ isi dị n'okpuru: 1. Dika nkenke nke nguzozi / akara nke ịchọrọ ịhazi. Igwe klas dị elu ga-enwe oke ziri ezi, mana ọ bụrụ na ọ bụghị ya, ọ na-abawanye ụgwọ. Na ọkwa klas dị ala ...
Oge gara aga na ugbu a nke kilogram
Ego ole ka otu kilogram dị? Ndị ọkà mmụta sayensị enyochaala nsogbu a yiri ka ọ dị mfe ọtụtụ narị afọ. Na 1795, France wepụtara iwu nke kwuru na “gram” dị ka “oke oke mmiri dị na cube nke olu ya ruru otu narị mita na okpomọkụ mgbe ic ...
Foldable weightbridge - imewe ohuru nke kwesiri ka ebughari
Ngwa JIAJIA nwere obi ụtọ ịkpọsa na ugbu a anyị nwere ikikere nke mmepụta na azụmaahịa nke mpempe akwụkwọ mpịachi folda nwere ike iji asambodo mba niile dị mkpa akwụkwọ mpịakọta ụgbọ ala a na-ebugharị ebugharị bụ nke dị mma n'ọtụtụ akụkụ, ọ nwekwara ọtụtụ atụmatụ na uru maka t .. .
Jiajia so na INTERWEIGHING ụlọ ọrụ ngosi na 2020 ọzọ. N'ihi ọrịa ahụ, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị enyi mba ụwa enweghị ike isonye na mmemme ụlọ ọrụ kwa afọ, anyị ka nyefere ozi nke ngosi ahụ n'aka ndị ahịa ọ bụla site na Internetntanetị, gụnyere ọhụụ ọhụrụ ...
New Balance maka igwe mmezi
2020 bu afo puru iche. COVID-19 agbanweela nnukwu ọrụ anyị na ndụ. Ndị dọkịta na ndị nọọsụ enyela nnukwu onyinye na ahụike onye ọ bụla. Anyị etinyekwala nwayọ na ọgụ megide ọrịa a. Mmepụta nke ihe nkpuchi chọrọ ule na-adịghị mma, ya mere ọchịchọ maka te ...
Akara Calibration Weight, Mmezi Mass, Akwụkwọ Akara Asambodo, Shear Bead Ibu Ibu, Mmezi arọ Set, Mmezi arọ N'ihi Digital Akara,